/Blog/tadalafil/Thenga ukuhlambuluka okuphezulu Tadalafil powder online: Zonke izinto ufanele ukwazi !!!
ezaposwa ngomhla 03 / 06 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo tadalafil. Ibe 6 Comments.
1.Tadalafil powder summary 2.Tadalafil powderfil ukuthengiswa
I-3.Usebenza njani i-tadalafil? I-4.I-tadalafil ifowuni ephephile ukuthatha?
5.Ukuthatha njani i-tadalafil eluhlaza ngokufanelekileyo? 6. Isicelo seTadalafil powder
7.Nokwenza i-cialias ekhaya (Ukubhekisela) 8.Tadalafil powder VS Sildenafil powder
9.Iziphumo zophando lwe-tadalafil powder Uhlolo lwe-10.Tadalafil powder
11.Ukuphi ukufumana umthengisi we-tadalafil othembekileyo? 12.Ungathenga njani i-tadalafil powder online?
13.Ungathenga njani i-tadalafil eluhlaza kwi-AASraw?
I. (i-Cialis powder) I-raad tadalafil Abalinganiswa basisiseko:
1.Tadalafil powder summary
Tadalafil powder, i-tadalafil, i-powderfil emhlophe, ngokuqhelekileyo yayisetyenziselwa ukwenza iipilisi ze-tadalafil.Izidakamizwa ze-adalafil, i-aslo ibiza / i-Cialis, enye yeklasi yezilwanyana ezibizwa ngokuba yi-PDE-5 (i-Phosphodiesterase type 5) inhibitors. Ukuphucula ngokwesondoTadalafil / Cialis ivuselela imisipha yemida yegazi kunye nokwandisa ukuhamba kwegazi kwiindawo ezithile zomzimba. I-Tadalafil / i-Cialis kunye namanye ama-PDE-5 inhibitors angancedisa amadoda ane-erectile disys function (ED) ngokuphucula impendulo erectile xa indoda ishukunyiswa ngesondo.Iyasetyenziswa ekuphatheni ukungasebenzi kwe-erectile (impotence) kunye neempawu ze-prostatic hypertrophy (i-prostate eyandisiwe) . Abantu ngokuqhelekileyo bathenga i-tadalafil I-powder ephakamileyo esuka ekuhlambulukeni umthengisi we-tadalafil.Ngaphandle kweTadalafil / Cialis, ezinye iziyobisi kule klasi ziyiViagra (Sildenafil) kunye noVevitra (Vardenafil) kunye noFlibanserin.
I-Tadalafil eninzi ngobuninzi, izinto eziphathekayo zaseTadalafil / Cialis, uhlobo lwe-White powder, umthengisi we-hormore wesini ngokuqhelekileyo uthengisa ukuhlambuluka Tadalafil powder online, zenze zonke iintlobo zeentengiso zeTadalafil / Cialis, iinkcukacha zeTadalafil / Cialis eluhlaza njengezantsi:
I-3.Usebenza njani i-tadalafil?
Kulungile, ngoku ngoku sazi ngakumbi malunga ne-tadalafil, kutheni singazami ukuqonda ukuba yintoni umphumo wayo? Kwimihlathi engentla sathi iTadalafil yi-PDE5 inhibitor - kodwa oko kuthetha ukuthini oko? Masiqwalasele ngokukodwa kwi-chemistry emele emva kwamandla ale gciwane.
Xa uthatha i-36-iriyure ye-Cialis / tadalafil, iyanciphisa umphumo we-PDE5 kwinkqubo yakho ngokukhawuleza, ukwenza ukuxilongwa kwe-cGMP ubuyele kumanqanaba aqhelekileyo njengemfutshane njengemizuzu ye-15-45. Nangona kunjalo, njengoko isiqingatha-sobomi seTadalafil sisifutshane, isiphumo sawo siphelela kwixesha leentsuku ze-2 ukwenza i-PDE5 ubuye kwaye impilo yakho yesini-ibe nzima. Ngokuphambene noko, xa uthabatha i-Cialis / tadalafil enamandla i-powder Yowokudla imihla ngemihla, inceda ukugcina amanqanaba enempilo ye-cGMP emzimbeni wakho, kukunika ithuba elide elilindelwe ukuzonwabisa ngesondo kwakhona. Kuthatha iintsuku ze-Cialis 4-5 ezinamandla ukuqala ukusebenza, ngoko ungalindelanga ukuba ube ngumlenze wangempela emva kokuba uthathe ipilisi yokuqala. Nangona kunjalo, inxalenye elungileyo kukuba awusoze ufumana ubunzima ebhedeni kwakhona - nje ngokuba uqhubeka uthatha i-Cialis / tadalafil powder imihla ngemihla.
I-4.I-tadalafil ifowuni ephephile ukuthatha?
Ngokuqhelekileyo, i-tadalafil powder yikhusi elikhuselekileyo. Nangona kunjalo, kufuneka uqwalasele ezinye izinto ozithathayo kunye nemiphumo yokudibanisa inokubangela. Ngokomzekelo, utywala kunye ne-tadalafil powder iyakwazi ukusebenzisana. Ukusela ngokweqile kunokukhokelela kwimiphumo emibi kakhulu. Ngokomodareyitha, ke, ukusela utywala angeke kubangele iingxaki. Nantsi into ekumele ukwazi ukuba kukunceda uhlale ukhuselekile ngelixa uthatha i-tadalafil.
Ukuba nje igrlasi yewayini okanye isiselo esinxilisayo akunakwenzeka ukuchaphazela i-tadalafil powder okanye kubangele nayiphi na ingozi yempilo. Kodwa ukuba uthatha i-tadalafil I-powder powder kwaye uphuze ngokweqile, unokuba uzibekele ezinye iingxaki. Ngokukodwa, ukusela kakhulu utshwala xa uthatha i-tadalafil I-powder ephosakeleyo ingakhokelela ekutheni i-orthostatic hypotension. Oku kunokubangela intloko, isisu, kunye nokuphelelwa amandla, oku kunokubangela ukuphazamiseka okanye ukulimala. I-Hypotension ingenza intliziyo yakho ibethe ngezinga elikhawulezayo. Kwezinye iimeko, oku kungakhokelela kwiingxaki ezintle zenhliziyo.
Esi siphumo singenzeka ngenxa yokuba i-tadalafil i-powder kunye notywala basebenza njengama-vasodilators. I-Vasodilators yinto eyanciphisa uxinzelelo lwegazi ngokuphucula iindonga zemithambo yakho yegazi, evumela ukuba imivenge yegazi ivule ngokubanzi.
I-Orthostatic hypotension inokuba yinto enokwenzeka ngakumbi nge-tadalafil I-powder Raw kunezinye izidakamizwa ze-erectile. Oku kungenzeka kukuba i-tadalafil powder ihlala kwisistim sakho ixesha elide kunezinye izilwanyana ezininzi ze-ED.
5.Ukuthatha njani i-tadalafil eluhlaza ngokufanelekileyo?
I-raw tadalafil ngokugqithiseleyo ifika kwiimarike kwiifayili zeepadalafil, iipsules, Xa uthatha isigqibo sokuthatha i-tadalafil, i-yuou kufuneka iguqule umthamo ngokwemfuno yakho.
Emva kokuba uthathe, Gcina le nyilisi kwisitya, ivalwe ngokuqinile, kwaye ingabikho kubantwana. Yigcine kwiqondo lokushisa lokushisa kwaye kude nobushushu obuninzi kunye nobumanzi (kungekhona kwindawo yokuhlambela).
Isicelo se-6.Tadalafil powder
Kithi, ngamanye amaxesha ukwenzela ukuba sibe nefuthe elinamandla okanye iziphumo ezinobuthakathaka, sinokwenza ikhofi yesondo ngokungongeza ngokwesondo ukuphucula i-tadalafil, ngokutsho kweemfuno zabaxhasi ukuba benze iziphumo zekhofi ehlukileyo. Oko kuthetha ukuba, i-tadalafil I-powder powder inganceda ukuba kwenziwe ikhofi yesini.
7.Nokwenza i-cialias ekhaya (Ukubhekisela)
1) 2 Igalagi "Ubuncinane bemigodi" Iibhotile ze-alcoho (50mL nganye).
2) I-2g i-tadalafil enobumba obuhlaza (i-powder i-cialis edayiswayo), inokuthenga i-Raw tadalafil ipowder ukuthengiswa kwi-intanethi kwi-tadalafil eluhlaza I-Raw powder umthengisi, kodwa qi ni sekise ukuba i-tadalafil yakho eluhlaza iphezulu, ayikho na inkohliso.
I-3) "I-dropper dropper", eyi-pipette / i-dropper nje emigqabini egqityiweyo ukubonisa ukuba lukhulu kangakanani umbane.
4) Iglasi elincinci / ibhotile / ibhotile. Ndicinga ukuba iglasi likhuselekile kulo mzekelo ukuba ufuna ukugcina i-tadalafil yakho ixesha elide.
1) Misela i-2g ye powdfilfil eluhlaza (i-cialis powder yokuthengisa) ukusuka kwi-SZOB
2) Thenga i-dropper ye-dropper / ipipette esivela kwi-pharmacy yakho yasekuhlaleni
3) Yiya kwisitora sakho sotywala uze uthenge i-2 encinci ye-50mL iibhotile zotywala. Ngokomzekelo Ketel 1 vodka.
I-4) Gcoba iglasi yakho / umquba okanye uqiniseke ukuba ayiyinyumba.
I-5) Gela enye ibhotile yotywala kwindawo yeglasi.
6) Beka yonke i-tadalafil eluhlaza kwi powal glass. Unokudinga ukusebenzisa i-funnel kodwa ukuba i-vial inomlomo okwaneleyo, unokuyityhala ngqo kwi-baggie.
7) Phalala enye ibhotile yotywala kwi-glass flap.
I-8) Faka i-cap kwi-glass ye-glass and seal tightly.
9) Gubha ngamandla ngaphambi kokukhipha umthamo.
Ukukhuseleka, ungaqala ngesilinganiso sehafu. Qinisekisa ukuba ugxininise phambi kweyonke idosi.
Kwimarike, kukho ezimbini ezibalulekileyo ezithandwayo zesondo ezixhasayo izidakamizwa: i-tadalafil I-powder emfutshane kunye ne-sildenafil powder, esetyenziswa ngokuqhelekileyo kwimpembelelo enamandla kunye nexabiso lokukhuphisana.
Kodwa kutheni i-amny tadalafil I-Raw powder umthengisi ukhetha uTadalafil njengento ephezulu yokuthengiswa ngokwesondo ekuxhaseni izixhobo zonyango. Oko kuthetha, kutheni i-tadalafil powder i bhetele kuneSildenafil powder.Siyazi into elandelayo, sibizwa ngokuba nguCialis noViagra.
i-tadalafil Iimveliso ezinobungozi obukhulu Nangona bobabini beqala ngokukhawuleza kwezenzo, i-Tadalafil isebenza ngokukhawuleza kune-Viagra. Nangona i-Viagra idla ngokuthatha imizuzu eyi-20-30, i-Cialis inokusebenza kwi-15-20 imizuzu. I-Cialis iphinda ifumaneke njenge-Cialis Daily, enokuthathwa kanye ngosuku, kwaye iya kukukunceda ukuba uphumelele ukulungiswa nanini na ngexesha lonke.
I-Cialis ineziphumo ezincinci kune-Viagra
Thatha umthamo omncinane weCialis ulingana neViagra?
I-Viagra ithathwa kwisiseko esifanelekileyo, kwi-dose ye-50mg, malunga neyure le-1 ngaphambi kokuba umsebenzi wesondo (nangona ungathathwa kwi-30 imizuzu ukuya kwii-4 iiyure ngaphambi). I dose ingeniswa kwi-100mg ukuba i-50mg ingasebenzi okanye iyancipha ukuya kwi-25mg ukuba iziphumo zecala ziyaxinwa. I-viagra ifanele ithathwe kanye ngemini nangona igalelo liphela emva kweeyure ezingama-4-5. Iziphumo eziphambili zentloko ziyintloko, zixhamla kwaye zihlengahlengiso. Ngokuqinisekileyo, umbala wemibala ungatshintshwa neViagra. Esi siphumo secala asenzeki ngeCialis.
Ngethuba senza uphando lwe-tadalafil I-powder powder, senza uphando kwi-intanethi, iiforam ezifanelekileyo, xa uzama ukuthayipha "i-tadalafil i-powder powder" kwi-google, sinegama elithile eliphambili njenge "tadalafil powder usa", "tadalafil powder canada", "tadalafil powder reddit "," Tadalafil powder china "... Ufumane ulwazi malunga ne-tadalafil kwilizwe elihlukeneyo kunye neembono ezivela kubasebenzisi, nathi siya kutyelela abanye bethu abathengi, sineenkcukacha ezithe xaxa, uphando lwe-tadalafil Uphando oluthile lwe-powder lubonisa:
Kuphi ukuthenga i-tadalafil I-powder powder? Uphando lwe-Tadalfil ngokugqithiseleyo lubonisa lula abantu abaninzi banomdla ngokuphathelele umbuzo, ewe, abanye abantu bakhetha ukuthenga i-tadalafil powder usa, abanye bakhetha ukuthenga i-tadalafil I-powder china, ezinye zikhetha i-tadalafil powder e-Canada, ezinye zikhetha i-tadalafil powder indian. Kunzima ukutsho ukuba ngubani owona mhle, bangela ukuba wonke umntu abe nesicelo esihlukileyo. Kodwa ungayithatha umzekelo: i-tadalafil I-powder powder e-USA iyinto ebiza kakhulu, i-tafalafil powder e-Indian, kulula ukuyithenga. Amasiko aseCanada aphezu kunzima ukudlula. Ukuthetha ngokuthe ngantoni, i-tadalafil Umthengisi we-powder wase-China ubonakala ubhetele, intengo, ubulungile, kodwa nceda ukhumbule, nje kuphela xa uthengela i-tadalafil I-Rawpowder inthanethi, u-probabaly uthenge enye inkohliso.
Uhlolo lwe-10.Tadalafil powder
Xa ugqiba ukuthenga i-tadalafil I-powder Raw, ungcono ukwazi indlela abanye abavakalelwa ngayo, ngokubhekisela, nantsi ezinye ze-tadalafil powder reviews evela kwi-AAS, ibonisa:
Ukuphonononga 1 / 23 / 2018
Ndandifuna ipadalafil iipilisi ngokuxhaswa ngokwesondo kwinyanga edlulileyo, ekubeni i-tadalafil 20mg kunye ne-tadalafil 10mg kwisitolo sendawo iyabiza, ndakhetha ukuthenga i-tadalafil powder online. Emva kokukhangela kwiGoogle, pinterest, ndafumana i-AAS inkampani ebanzi. xabiso, kunye nezinye iinkcukacha ezifana ne-tadalafil vs viagra, i-tadalafil dosage, i-tadalafil kwimiphumo emibi kwixesha elide, emva kokutshekisha kwakhona ukuhlaziywa kwe-tadalafil, ndayala i-10g.
Ndathabatha i-10mg tadalafil powder kwi-10pm andizange ndibone nayiphi na impembelelo de ndavuka ebusuku malunga ne-1am ene-erection eqinile. Isondo silula kwaye ngokuqinisekileyo senze loo msebenzi! Umphumo kuphela wecala lalinomzimba onobuhlungu kakhulu ebusuku, kodwa, i-tadalafil vs sildenafil, impembelelo yecala ibuhlungu kakhulu andizange ndifune i-paracetamol okanye nayiphi enye into.ebenzi kakuhle!
Ukuphonononga 2 / 02 / 2018
I-Tadalafil VS viagra, iViagra ayizange isebenze kakuhle kum kwaye ndandithandekile ukuba ndibe neentloko, ngoko ndatshintshela eTadalafil. Khangela i-tadalafil ebomvu kwiAAS, amava amaninzi.
11.Ukuphi ukufumana umthengisi we-tadalafil othembekileyo?
I-tadalafil Ininzi yomsebenzisi womdaka, ukufumana i-tadalafil enokwethenjelwa Umthengisi we-powder ebonakalayo ingxaki, ewe, kufuneka ukuba uqaphele ngakumbi. Ngendlela yokukhangela i-tadalafil, ndafumana iindlela ezahlukeneyo zabasebenzisi abelana ngazo, ndifumene isishwankathelo. umthengisi onokuthenjwa we-tadalafil, apha ziindlela ezininzi.
Okokuqala, zama ukukhangela umthengisi ophezulu we-20 tadalafil kwi-google, kwaye uzama ukwazi ezinye iinkcukacha, kodwa ngokubhekiselele ekuhambeni.
Okwesibini, ndiza kuzama ukukhangela kwiGoogle, youtube, pinterest, nakwezinye iiforam ezifanelekileyo, ezifana ne-tadalafil I-red powder reddit. kutheni ndixhomekeke kakhulu kule nto? Ngenxa yenkampani ekhuphayo kwaye inokwethenjelwa, kufuneka ibenze ibenze ibonakale i-amony abantu.Ukubona kubonakala, ividiyo, imifanekiso kunye neeblogs ... .nobungqina obunamandla ..
Emva koko ngokuthetha nomsebenzi wabo weendleko zexabiso kwaye ukhangele i-tadalafil Ukuhlaziywa kwe-powder powder kwenkampani yabo, khetha ukusebenzisana nabo.
12.Ungathenga njani i-tadalafil powder online?
Xa ucinga okanye sele usugqibile ukuthenga i-Raw tadalafil powder online kwi-tadalafil yomphakeli we-powder, kufuneka ucinge ngombuzo omncinci njengolu hlobo luni lobungcwele obufunayo malunga ne-tadalafil. ibakala- ukusetyenziswa komntu kungabonwa ngo-99%, kungenokuba kubiza kakhulu kodwa kulungele ukusetyenziswa .Kudingeka ucinge ngexabiso elingawwamkelayo. Kwimarike, intengo ye99% yobungcwele bude tadalafil ijikeleze i-650USD / 1kg, kodwa ngokubhekiselele, kubangele sonke siyazi ukuba ixabiso lixhomekeke kubungakanani kunye nomgangatho. Ngaphandle koko, xa ukhetha i-tadalafil Umxhasi we-powder powder ukuze usebenzisane, kufuneka ucinga ngezinto ezithile ezifana nokuthenga i-tadalafil. ? i-tadalafila i poww china china? Uhlobo luni lokudlula, uluhlobo luni lokuthutha olukhethiweyo ukuba unyule, nokuba ngaba unomgaqo wokubuyisela, ngaba baya kwenza ntoni xa iimpahla zakho zithathwa ngamasiko, zinokusombulula ezinye iingxaki? Ingaba inkonzo yabo ilungile? nokuba ngaba bafunde, njalo njalo ... Ucwaningo lwe-Tadalafil eluhlaza lwepowder lubonisa phakathi kwale nto, ngenxa yeyona tadalafil eninzi eluhlaza umthengi, bathe baninzi malunga nomgangatho, kuba ngobungcwele bude tadalafil eluhlaza bunokuvelisa izidakamizwa ezininzi ze-tadalafil.Kubalulekile ukuba ukwakha idumela elihle.
Emva kokuqwalasela zonke ezi zinto, khetha i-tadalafil efanelekileyo yomthengisi wempuphu yokubambisana.
13.Nokungathenga njani okuluhlaza AASraw?
I-6 Impendulo Amazwana
UDkt Patrick Young10 / 07 / 2018 kwi-8: 18 ntambama
Kulungile, ndikuthumelele i-imeyile ukuqinisekisa ixabiso.
Ngaba10 / 02 / 2018 kwi-7: 55
Sawubona ndifuna ukwazi ixabiso legrama ye-powder tadalafil, ndiyabonga.
UDkt Patrick Young06 / 21 / 2018 kwi-8: 55 ntambama
Uthetha ukuthini, andiyiqondi. Sinokuqhagamshelana njani ne-imeyile? I-imeyile yam [Imeyile ikhuselwe]
brandon06 / 21 / 2018 kwi-4: 55 ntambama
Ixabiso elingabalulekanga kuwo onke ama-steroids nceda?
UDkt Patrick Young06 / 14 / 2018 kwi-4: 19
UDkt. Bhupinder Singh06 / 14 / 2018 kwi-3: 25
Sidinga i-500 gm. i-tadalafil powder, xelela intlawulo kunye nenani lokufaka kwi-akhawunti yakho.